२४ वर्षअघि नै बिल गेट्सको भविष्यवाणीः इन्टरनेटमा लाइभ भिडियो प्रशारण सेवा आउनेछ « Khabarhub
२४ वर्षअघि नै बिल गेट्सको भविष्यवाणीः इन्टरनेटमा लाइभ भिडियो प्रशारण सेवा आउनेछ
१९ जेठ २०७६, आइतबार
एजेन्सी– सूचना प्रविधिको तिव्र विकाससँगै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट हुने प्रत्यक्ष भिडियो प्रशारण सेवा सबै मानिसमाझ लोकप्रिय छ । तर यो सेवाका विषयमा विश्वका धनाढ्य व्यक्ति एवं माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले २४ वर्ष अगाडि नै भविष्यवाणी गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा अहिले कुनै पनि समाचार एवं जानकारी क्षण भरमै संसारभर फैलन्छ ।
बिल गेट्सले २४ वर्षअगाडि नै जिक्यू पत्रिकाका पत्रकार ट्यारी प्रेसेलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा यसबारे बोलेका थिए । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आउने अफवाह फैलाउने खालका गलत समाचार तथा लाइभ सेवाबारे भविष्यवाणी गरेको उक्त अन्तर्वार्ताबाट स्पष्ट हुन्छ ।
तत्कालिन समयमा गेट्स ३९ वर्षका थिए । त्यसबेला फोब्र्स म्यागिजिनले उनलाई १२ दशमलब ९ बिलियन डलरको सम्पत्तिका साथ विश्वकै धनी व्यक्तिको सूचीमा राखेको थियो । अहिले भने उनी विश्वको धनी व्यक्तिको दोस्रो नम्बरमा छन् । पहिलो नम्बरमा रहेका अमेजनका जेफ बेजोसको सम्पत्ति ९९ दशमबल ६ बिलियन रहेको फोब्र्सले जनाएको छ । २४ वर्षअघि गेट्ससँग पत्रकार प्रेसेले गरेको अन्तर्वार्ताको अंश मार्क बरोसले ट्वीटरमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । मार्क बेरोस पत्रकार प्रेसेको जीवनी लेखक हुन् ।
अन्तर्वार्तामा गेट्सले भनेका छन्, ‘इन्टरनेटले हरपल हाम्रो मनोरञ्जनको शैलीलाई बदलिदिने छ । अहिलेको (९० को दशक) समयमा धेरैजसो मानिसहरुको साथमा चलचित्र हेर्नका लागि भिसिआर वा डिभिडी प्लेयर हुन्छ । आगामी दश वर्षमा यी सबै (भिसिआर–डिभिडी) वस्तुहरु हराएर जानेछन् ।’
प्रेसे प्रश्न सोध्छन्, ‘अहिले हरेक घरको अति आवश्यक हिस्साको रुपमा रहेको भिसिआर–डिभिडी साँच्चै नै पूर्ण रुपमा हराएर जान्छ त ?
गेट्स– ‘अबको चार–पाँच वर्षमा दोस्रो प्रविधि डिस्क प्लेयरले यसको स्थान लिने छ । यसपछि लाइभ भिडियो प्रशारणको सुविधा आउनेछ । त्यसबेला यसका प्रयोगकर्ताले भिसिआरलाई अनावश्यक वस्तुको रुपमा लिनेछन् ।’
बिल गेट्सको अन्तर्वार्ताको छापिएको दश वर्ष सन् २००५ मा युट्युबको स्थापना भएको थियो । यस्तै सन् २००७ मा नेटफ्लिक्सले चलचित्र तथा अन्य भिडियो शो इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन प्रशारण गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले नेटफ्लिक्सका १५ करोड सब्स्क्राइबर्स रहेका छन् । यसका साथै हरेक महिना २ अर्बभन्दा बढी मानिसहरुले युट्युबमा भिडियो हेर्ने गरेका छन् ।
गेट्सले उक्त अन्तर्वार्ताको क्रममा सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने खालका गलत समाचार पनि आउने उद्घोष गरेका थिए ।
प्रेसेले सोधेका थिए, ‘के आगामी दिनमा मानिसहरुले इन्टनेटको प्रयोग गलत खबर फैलाउनका लागि पनि गर्नेछन् ?
प्रेसेले यो प्रश्नसँगै उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका थिए, ‘के कुनै व्यक्तिले सामूहिक नरसंहार हुँदै नभएको दावी गर्न सक्छन् ?’
गेट्सले भनेका थिए, ‘इन्टरनेटमा गलत समाचार व्यापक रुपमा आउनेछ । यद्यपि, तपाईंमाझ त्यसको वैधता जाँच्ने मौका भने रहनेछ ।’
प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०७६, आइतबार ५ : ४० बजे
उदयपुर– उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–८ देउरीमा करेन्ट लागेर १ जना वृद्धको
काठमाडौँ- नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ
हिमाञ्चल प्रदेशमा बस दुर्घटनामा परी १२ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ- भारतको उत्तरी पहाडी राज्य हिमाञ्चल प्रदेशमा सोमबार बस खोल्सामा
मधेसका १०५ पालिकामा वृक्षरोपण गरिने नवनियुक्त वनमन्त्री प्रदीप यादवको भनाइ
काठमाडौँ- नवनियुक्त वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले ‘जनताको रहर हरित
प्रतिबन्धित लागूऔषधसहित बागलुङमा चार जना पक्राउ
काठमाडौँ- जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले ठूलो मात्रामा प्रतिबन्धित लागूऔषधसहित चार